Israa'iil oo qaraarkii Qaramada Midoobay ku tilmaantay mid ceeb ah - iftineducation.com
Israa’iil oo qaraarkii Qaramada Midoobay ku tilmaantay mid ceeb ah
iftineducation.com – Israa’iil ayaa si caro leh uga jawaabtay qaraar uu Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay kaga dalbaday inay joojiso dhismooyinka deegaamaynta ah ee ay ka waddo dhulka Falastiin ee ay haysato.
Ra’iisulwasaare, Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay in Israa’iil aanay adeeci doonin shuruudaha ku jiro qaraarka kaasi oo uu ku tilmaamayba inuu yahay mid ceeb ah.
Israa’iil ayaa wadatashi ugu yeertay safiiradeeda u fadhiyay dalalka New Zealand iyo Senegal, labadan dal ayaa ka mid ahaa dalalkii gadaal ka riixayay qaraarka Qaramada Midoobay, sidoo kale Israa’iil waxa ay jartay dhammaan mashaariicdii gargaarka ee ay siin jirtay dalka Senagal.
Afhayeen u hadlay Falastiiniyiinta ayaa sheegay in qaraarka uu ka dhigan yahay guul u soo hooyatay sharciga caalamiga ah.
Qaraarka ayaa la meel mariyay kaddib markii Mareykanka oo aad u taageera Iraa’iil uusan adeegsan diidmada qayaxan.
Daawo: Golaha Amniga ee QM oo isku Raacay Go’aan ISRAA’IIL ay ka Seexan wayday oo lama Filaan Noqday
Gabdhaha Islii oo laga wacyigelinaayo raacidda mootada